I-Appboy: Qonda, Vavanya kwaye ubandakanye abasebenzisi beSelfowuni | Martech Zone
I-Appboy: Qonda, Vavanya kwaye ubandakanye abasebenzisi beSelfowuni
NgoLwesine, Novemba 7, 2013 NgoLwesithathu, Julayi 23, 2014 Douglas Karr
Inkqubo yendalo ephathekayo iqhume yaya ku ngaphezulu kwesigidi seapps kule minyaka mithathu idlulileyo. Iinkampani ziyasokola ngexabiso lokufumana okuphezulu komsebenzisi kunye neqondo lokugcina eliphantsi. Ngaphantsi kwama-60% eeapps ezihambayo zibonelela ngembuyekezo elungileyo kutyalo-mali.
Appboy Isisombululo esiqhutywa yidatha esenza ukuba abathengisi bohlelo lokusebenza lweselfowuni benze iiprofayili zomsebenzisi ezityebileyo kubaphulaphuli babo abahamba-hambayo, emva koko babanike amandla ngokulandelelana kweemveliso ezizisebenzelayo:
Izaziso zePush bonelela ngolwazi olufanelekileyo, ngexesha elifanelekileyo ngqo kwiscreen sasekhaya somsebenzisi (nokuba usetyenziso alusebenzi), ukwandisa ukubandakanyeka ngama-30-60%.
Iindleko zeendaba yenza indlela yokuqaqambisa iziqwenga ezinkulu zomxholo kwimbonakalo yamakhadi ahlaziyiweyo ngaphandle kwezithintelo zezaziso zokutyhala kunye nemiyalezo yangaphakathi nohlelo.
Imiyalezo engaphakathi nohlelo bonelela ngejelo lonxibelelwano lokutyhala izaziso, kodwa ngaphakathi kosetyenziso kunye nokuguquguquka okukhulu.
Imeyli ibonelela ngeendlela zokunxibelelana nabasebenzisi ngaphaya kwesicelo sakho esiphathwayo. I-imeyile evulekileyo kwiiselfowuni idlulile kwidesktop, kubalulekile ukuba i-imeyile ibe yinxalenye yomxube wezinto ezininzi.
Ingxelo engaphakathi nohlelo ngokusebenzisa iifom kunye nenkxaso yabathengi ibonelela ukufikelela kubaprofayile babasebenzisi ngemicimbi kwaye ngokukhawuleza ukulungisa iingxaki ukunciphisa ukubonwa koovimba beevenkile. Ukudityaniswa kweenkqubo zomntu wesithathu ezifana Zendesk, I-Salesforce Desk.com kwaye UmsebenzisiVoice zikhoyo.
Ukwahlulahlula -Jolisa kwaye wenze umxholo okhethekileyo kwimidla yomsebenzisi.
Uvavanyo lweMultivariate -Ukwazi ukuvavanya izinto ezintandathu ezahlukeneyo kumjelo wemiyalezo emininzi kubandakanya imiyalezo yangaphakathi nohlelo, i-imeyile kunye nezaziso zokutyhala.
Abasebenzi beenkonzo zobungcali bakwakhona ukunceda ukuqinisekisa impumelelo, ukuqhuba ngokwenqanaba lokuguqula umkhankaso ogqitha ngaphezulu kwe-30%. I-Appboy ibone ukukhula kwe-400% kwiinyanga ezili-9 ezidlulileyo kwaye ngoku kubalwa ngaphezulu kwabaxhasi be-1,000, kubandakanya Umbhalo +, Abaphuculi beeDolophu, I-GSN, I-SnipSnap, Bloomberg, ukumila kwaye I-PopSci.
tags: umfundiIndawo ekuyoUjoliso lwe-geogeotargetingUkuThengiswa kweMfono kunye neThebhulethimobile app inkxaso kubathengiImiyalezo ye-mobile appimeyile ephathekayourhwebo mobileukuthengisa okuzenzekelayoiselfowuni yamajelo amaninziUkutya kweendaba ezihambayoizaziso zeselfowuni zokutyhalaukuvavanywa kwezinto ezininziizaziso zokutyhala
Isikhokelo kuThengiso lweAkhawunti ekuJoliswe kuyo
I-Kapost: Umdibaniso woMxholo, ukuSebenza, ukuSasazwa, kunye noHlahlelo
URussell Gomez Macfarland
Nov 7, 2013 ngo-6:34 PM
Iqonga elinomdla. Enkosi ngalentshayelelo, kuya kufuneka ndiyifunde ngokusondeleyo le nto phambi kwesindululo.